शिक्षण र सिकाइको वैकल्पिक विधि... :: तारा गैरे :: Setopati
शिक्षण र सिकाइको वैकल्पिक विधि 'अनलाइन शिक्षा'
कोरोना संक्रमण कम गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि यतिबेला विद्यालय, विश्वविद्यालय- कलेजहरूले न त पठन-पाठन न त बाँकी रहेको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न पाइरहेका छन्।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनलाइनबाटै नतिजा प्रकाशित गर्न र अनलाइन विद्यार्थी भर्ना लिन मिल्ने शैक्षिक संस्थानहरूले शिक्षण र सिकाईको वैकल्पिक विधि जानको लागि प्रयासहरू थालेका छन्। स्कूल र कलेजहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् जसले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
स्कूल, कलेज, र विश्वविद्यालयहरू सुधार गरिएको अनलाइन शिक्षा प्रक्रियाको लागि छलफल गरिरहेका छन्। निजी स्कूलहरूको छाता संगठन प्याब्सनले प्री-प्राइमरीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलाई एक महिना निःशुल्क 'डिजिटल लर्निङ' प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर छन्।
कोभिड-१९ सुरु भएदेखि नेपालका सबै ११ विश्वविद्यालयहरू शिक्षण र सिकाईको वैकल्पिक विधि निरन्तर खोजी गर्दै छन्। विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन सामग्री तयार गरेर उनीहरू अनलाइन जानको लागि प्रयासहरू निरन्तर जारी रहेका छन्। यद्यपि यस्तो समयमा हामी पनि सोच्दछौं कि अनलाइन शिक्षाले कक्षामा सफल परिवर्तन गर्न सक्छौं? के नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूसँग नेपालमा सफलतापूर्वक अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्ने स्रोतहरू छन्?
इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, धेरै जसो स्कूल र कलेजहरू अनलाइन शिक्षाको लागि तयार छैनन्। माइक्रोसफ्टले अनलाइन शिक्षा संसाधनको साथ २५ सयभन्दा बढी शैक्षिक संस्थानहरू प्रदान गरेको छ। नेपालका नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) जस्ता केही विश्वविद्यालयहरू अनलाइन शिक्षा सञ्चालनको लागि सफल छन्।
तिनीहरू लकडाउन पहिले नै अनलाइन संसाधनहरू र कोर्स मोड्युलहरू थालेका थिए। यद्यपि, अन्य कलेजहरू पनि तयारीको नजिक थिएनन् र भर्खरै अनलाइन कक्षा उपलब्ध गराउनको लागि तयार हुन थालेका छन्। सर्वप्रथम, अनलाइन शिक्षा अपरिहार्य छ भन्ने तथ्यलाई बुझेपछि उनीहरूले गरेका महत्वपूर्ण र सही कुरा हो।
यो प्रवृत्ति वा सिफ्ट हाम्रो जीवनमा 'नयाँ सामान्य' हुनेछ। कोभिड-१९ को प्रभाव केही समयको लागि जाँदैछ र हामी सामाजिक दुरी कायम गर्न आवश्यक छ। कोभिड-१९ को प्रकोपले स्कूल र कलेजहरूलाई विश्वभर बन्द गर्न बाध्य तुल्यायो।
नेपालमा स्कूल र कलेजहरू तालाबन्दीका कारण, कुनै पनि समयमा चाँडै नै फिजिकल क्लासको आशा गर्न गाह्रो भएको छ। यस्तो कठिन समयमा नेपालका धेरैजसो कलेजहरूले अनलाइन कक्षा अपनाएका छन् र प्रत्येक विद्यार्थीलाई पुग्न यथासक्दो कोशिस गरिरहेका छन्। कलेजहरू उनीहरूको परीक्षा र भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्छन्।
धेरै कलेजहरूले पहिले नै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर अनलाइन कक्षा लागू गरेका छन् जबकी केही अझै श्रोतहरूको सम्भावित उपयोगको खोजीमा छन्। ती जो अनलाइन कक्षा चलिरहेका छन्, अनलाइन प्लेटफर्महरू जस्तै जूम, गुगल मीट, ह्यागआउट्स, र अन्य प्रयोग गर्दै। वास्तवमा, त्यहाँ केही अनलाइन कक्षामा दुवै स्नातक स्तर र मास्टर स्तर विद्यार्थीहरूको १००% सहभागिता छ।
अनलाइन कक्षा धेरै प्रभावकारी रूपमा गइरहेका छन् र सबै विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू सक्रिय रूपमा भाग लिइरहेका छन्। हाम्रो हामी इन्नोभटिव कलेज अफ हेल्थ साइन्स सबै विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू सक्रिय रूपमा भाग लिइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाको अन्तमा असाइनमेन्ट तोकिन्छ र तिनीहरूले आफ्नो कार्यहरू अनलाइन सबमिट गर्न सक्दछन्।
यद्यपि विद्यार्थीहरूले केही समस्याहरूको सामना गरे जसका कारण उनीहरू पहिले अनलाइन कक्षाको लागि प्रयोग भइरहेको थिएन। तर अब, तिनीहरू यसको बानी भइरहेका छन् र वास्तवमै यसलाई शारीरिक कक्षाहरूमा प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यद्यपि, सफलतापूर्वक केही कक्षाहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो छ जुन व्यावहारिक पाठहरू समावेश गर्दछ।
केवल व्यावहारिक होइन तर गणित र संख्यात्मक सामेल हुने विषयहरू। त्यसो भए, हामी त्यस्तै विषयवस्तुहरूलाई सजिलो पार्न सामग्री पनि त्यस्तै विकास गर्न कोशिस गर्दैछौं। त्यो बाहेक, विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक विषयहरूको लागि शारीरिक कक्षाको स्वाद प्राप्त गर्दैछन्।
अनलाइन कक्षाको भविष्य राम्रो छ जुन लकडाउन पछि जारी हुन्छ। म एक घन्टा अनलाइन कक्षा र बाँकी दुईको लागि भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजना गर्दैछु। तर त्यहाँ केही विषयहरू छन् जुन हामीले हप्तामा दुई घन्टा कक्षाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट रूपमा हामीले यसको सम्भावनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ र हामी लकडाउन पछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं कि भनेर हेर्नुपर्नेछ।
तर यो निश्चित छ कि हामी कुनै पनि लागतमा अनलाइन कक्षा छाड्ने छैनौं। त्यसकारण हामीले जुमको होस्ट खरीद गरेका छौं र हामी यसलाई लकडाउन पछि पनि प्रयोग गर्ने योजना बनाउँछौँ।
साथै, नेपालमा हड्तालहरू र अन्य प्रकारका हड्तालहरू छन् जुन प्रायः आउँदछ। अनलाइन कक्षाको साथ, हामी पाठ्यक्रमहरू सजिलैसँग भेट्न सक्दछौं, त्यस्ता घटनाहरूमा पनि। यसैगरी, सरकार र विश्वविद्यालयहरुबाट अनलाइन कोर्सको वैधताको प्रश्न छ।
मानौं यदी हामी अर्को महिनाहरुका लागि शारीरिक कक्षा चलाउन असमर्थ छौं भने हामीले अनलाइन परीक्षाको पनि साथ ल्याउनु पर्छ। सरकार र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको लागि मूल्यांकन योजना प्रदान गर्न र बोर्ड परीक्षाहरूको नैतिकता तयार गर्न आवश्यक छ।
यदि त्यसो भने के अनलाइन कक्षा प्रभावकारी रूपमा चल्दैछन्? के तिनीहरू विद्यार्थी वा व्याख्याताहरूको लागि कुनै चुनौतीहरू छन्? यो प्रश्न मुख्य छ। पक्कै प्राध्यापकहरू सक्रियताका साथ तालिकाअनुसार कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि केही विद्यार्थीहरू नेटवर्क जडान र कभरेजको साथ समस्याको सामना गरिरहेका छन्।
यी विद्यार्थीहरू आफ्नो घरहरूमा ती ठाउँहरूमा छन् जहाँ वाइफाई वा कुनै नेटवर्क कभरेज पाउन गाह्रो छ। तर हामी यो सुनिश्चित गर्दैछौं कि त्यस्तो विकल्प नभएको विद्यार्थीहरूले हाम्रो अनलाइन कक्षाको रेकर्ड गरिएको भिडियो/अडियो फाइलहरू प्राप्त गर्दछन्। सिमित नेटवर्क कभरेजको साथ ग्रामीण ठाउँहरूमा टाढा रहेका केही विद्यार्थीहरूका लागि हामीसँग उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जडान हुने समस्याहरू छन्।
भिडियो साझेदारी र फाइल साझेदारी हाम्रा विद्यार्थीहरूको ५% को लागि प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यद्यपि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरूले एनटिसी वा एनसेलको डाटा प्याकहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् र उनीहरूको मोबाइल फोनमा इन्टरनेट प्रस्तावहरू छन्। जो विद्यार्थीहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कनेक्ट हुन सक्षम छैनन्, उनीहरूलाई भिडियो रेकर्डिङहरू र फाइलहरू पठाउन हामी एसिन्क्रोनस तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेका छौं।
अनलाइन कक्षा संचालनका लागि एक विशाल क्षेत्र छ र हामी पक्कै पनि हाम्रो पाठ्यक्रम मोड्युलमा केही समावेश गर्नेछौं। कलेजहरू ती ठाउँहरू हुन् जहाँ विभिन्न संकायका कम्तिमा २०० देखि ३०० विद्यार्थीको धेरैजसो भेला हुन्छन्। यो विद्यार्थी र शिक्षण संकायको सुरक्षा र सुरक्षाको कुरा हो, र हामी कुनै जोखिम लिन सक्दैनौं।
त्यसो भए, हामी लकडाउन पछि कम्तिमा एक महिनाको लागि अनलाइन कक्षा/ प्लेटफर्महरूलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ, जबसम्म हामी यो सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं कि त्यहाँ तिनीहरूको स्वास्थ्यलाई कुनै जोखिम छैन। विश्वका धेरै शीर्ष विश्वविद्यालयहरू पहिले नै अनलाइन मूल्यांकनहरू, सुविधा प्रबन्धन र पाठ्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्।
तैपनि, विद्यार्थीहरू निर्धारणको आधारमा मूल्याकन गरिन्छ र परीक्षाहरू अनलाइन गरिन्छ। मलाई लाग्छ हामीले शिक्षाको अनलाइन मोडको साथ अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ र 'कक्षामा टेक्नोलोजी' र 'शिक्षाको लागि टेक्नोलोजी' को अवधारणाहरूलाई सम्बोधन गर्न योजनाहरू विकास गर्नुपर्नेछ। हामीले शिक्षामा अगाडि बढ्नको लागि टेक्नोलोजी' को परिवर्तनलाई स्वीकार्नुपर्दछ।
हामीले नियमित कक्षाका साथ अनलाइन कक्षाको समिश्रणको सम्भावना बारे छलफल गर्नु पर्नेछ। त्यहाँ स्रोतहरू, असाइनमेन्टहरू, ई-लाइब्रेरी, र आन्तरिक परीक्षाको सवाल छ, जब यो अनलाइन कक्षाको दायरामा आउँदछ। हाल, हामी केवल संकटको समयमा व्यवस्थापन गर्दै छौं तर यदि विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाको वैधताको लागि नीतिमा निर्णय गरेको खण्डमा हामी निश्चित रूपमा हाम्रो पाठ्यक्रम मोड्युलमा छलफल गर्न र पुन: डिजाइन गर्न सक्दछौं।
यसको लागि हामीले उत्पादकत्व र संचार अभिवृद्धि गर्न प्रविधि पूर्वाधार र स्रोतमा लगानी गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा, म विश्वास गर्दछु कि हामीले एक अनलाइन पुस्तकालयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ जुन विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न विषयहरूको सन्दर्भमा सबै सन्दर्भहरू छन्। यदि त्यहाँ त्यस्तो समय आयो जब कलेजहरूले महिना र वर्षसम्म रहनुपर्नेछ, तब पक्कै पनि विश्वविद्यालयहरू र सरकारले पुनः डिजाइन गरिएको पाठ्यक्रम मोड्युलको साथ आउनु पर्छ।
मूल्यांकन, वर्ग, र परीक्षा, हरेक सुविधा अनलाइन हुनुपर्छ यस्तो अवस्थामा जो एक काल्पनिक स्थिति मात्र हो। तर लकडाउन पछि, म विश्वास गर्दछु हामी अनलाइन र अफलाइन कोर्सहरूको मिश्रित मोड्युलको साथ जान सक्दछौं। हामी अनलाइन कक्षाको लागि सैद्धान्तिक विषयहरु दिन र नियमित अभ्यासको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं।
भविष्यमा हाम्रो पाठ्यक्रम मोड्युल प्रबन्ध गर्ने कलेज र विश्वविद्यालयहरूले यो एक ठूलो पहल हो भन्दै सोच्न आवश्यक छ। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र डिजिटल नेपालतर्फ परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
(लेखक लेक्चरर हुन्।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७, १५:५०:००